Sina 3 4 inch kofehy mpampitohy fantsom-by fantsom-bokatra fanamboarana sy orinasa | Topa
3 4 inch kofehy mpampitohy fantsom-pifandraisana
Model No .: 20741
Fanerena: Fanerena avo
Suhu miasa: Maripana ambony
Karazan-kofehy: Kofehy anatiny
Fitaovana: Carbon Steel
Kaody lohany: Hexagon
Fandeferana: 0.01mm - 0.02 Mm
Fampiharana: Mpampitohy sodina fantsom-boasary
Ambonin'ny: Zinc Plating
Loko: Fotsy na mavo
Tombo-kase: 70 Degre
Endrika: Fitaovana hydraulic elbow
Anaran'ny vokatra: 3 4 Inch Ireo varingarin'ny fantsom-boasary varahina
Famokarana: 500000 pcs isam-bolana
Marika: Topa mpampitohy fantsom-pifandraisana
Toerana niandohana: mpampitohy fantsom-pifandraisana avy any Shina
Fahaizana manome: 500000 pcs mpifanaraka fantsom-pifandraisana isam-bolana
Taratasy fanamarinana: mpampitohy fantsom-pifandraisana ISO
Kaody HS: 73071900
Seranan-tsambo: Tianjin, Ningbo, Shanghai
Varahina misy kofehy 4 4 inch Sodina Sodina mpampitohy
Mila mpampitohy fantsona misy kofehy? Aza mitady lavitra intsony. TOPA dia mpanamboatra mpamatsy fantsom-pifandraisana misy kofehy, ao anatin'izany: varingarina hydraulic,Fitaovana hydraulic, fametahana hydraulic, fantsona ary maro hafa. Ny traikefanay 20 taona an'ny mpampitohy fantsom-pifandraisana feno dia manome antoka fa izahay ihany no mitondra ny tsara indrindra amin'ny fantsom-pifandraisana hydraulic.
sary mpampitohy fantsom-pifandraisana:
datasà mpampitohy fantsom-pifandraisana:
45 ° FIVORIANA METRIKA 74 ° CONE SEAT SEAL 20741 Metric Fitting Vehivavy
Fanamarihana:1.Ho ampiasaina amin'ny fantsom-pifandraisana. 2. Raha ampiasaina amin'ny fantsom-boaloboka dia 20792-xx-xx ny laharan'ny andiana selika.
E HOSE BORE lafiny
FIZARANA No. THREAD E DN tsipika C S H
Fanamarihana: 1.Ho ampiasaina amin'ny fantsom-pifandraisana. 2. Raha ampiasaina amin'ny fantsom-boaloboka dia 20742-xx-xx ny laharan'ny andiana selika.
3 4 inch hose mpampitohy fonosana:
Ny baiko mpampitohy hosoka 3 4 "rehetra dia fonosina ao an-trano ataon'ny mpiasanay amin'ny baoritra matanjaka mifono fonosana miaro. Ny fonosana rehetra dia misy soratra mazava tsara amin'ny soratra. Avy eo dia hametraka boaty ao anaty fitoeran-kitay misy kitapo plastika lehibe isika.
3 4 inch hose mpampitohy antsipirian'ny orinasa:
Ny orinasa TOPA dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana sy fivarotana systerm mikoriana mikoriana. Ny mpampitohy fantsom-by fantsom-by dia misy: Tube Fittings, adaptatera, Rohy Hydraulika, Selika fanerena avofivoriambe sy faritra vy hafa, ary koa ny mpandraharaha ho an'ny vokatra mitambatra tsiranoka mifandraika amin'izany. Manome serivisy OEM ihany koa izahay.
Ireto mpampitohy fantsom-by fantsom-by ireto dia ampiasaina amin'ny aérospace, automotive, fanamboarana sambo, fanafody, simika, solika ary faritra hafa.
mpampitohy fantsom-pifandraisana fantsom-by:
mpampitohy fantsom-by fantsom-by dia be mpampiasa amin'ny vatan'ny milina sy hydraulic mampita,
tanimbary, toeram-pitrandrahana, fananganana, fitaterana ary indostria hafa.
1. Ahoana no ahafahanao miantoka ny kalitaon'ny mpampitohy hosotra misy kofehy?
Handamina fanamafisana ohatra ny mpampitohy hose izahay alohan'ny famokarana. Nandritra ny famokarana Hydraulika Fittings, manana mpiasa QC matihanina mifehy ny kalitao sy ny fanamboarana mifanaraka amin'ny santionany voamarina. Halefanay aminao ihany koa ny tatitra ara-nofo sy ny tatitra kalitao miaraka amin'ny fandefasana.
2. Manolotra serivisy fantsom-pifandraisana OEM ve ianao ary afaka mamokatra ho toy ny sary?
Ie. Manolotra serivisy mpampitohy fantsom-pifandraisana OEM izahay. Manaiky famolavolana fanao izahay ary manana ekipa mpamorona matihanina afaka mamolavola mpampitohy fantsom-pifandraisana mifototra amin'ny zavatra takinao. Ary afaka mamorona mpampitohy fantsom-pifandraisana vaovao mifanaraka amin'ny santionanao na sary
3. Azontsika atao ve ny mamolavola fonosana ho an'ny mpampitohy fantsom-pifandraisana?
Eny, azonao atao ny manondro ny refin'ny baoritra sy ny paleta.
4. Manolotra santionany maimaimpoana amin'ny mpampitohy fantsona ve ianao?
Afaka manome santionany maimaimpoana amin'ny mpampitohy fantsom-pifandraisana izahay ary tokony handoa ny entana ianao. Aorian'ny fametrahana baiko dia haverinay ny entana
5. Inona ny ora fandefasana anao amin'ny baiko mpampitohy kofehy?
Amin'ny ankapobeny dia handamina ny fandefasana entana izahay afaka 25 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola. Raha maika dia afaka mamaly ny takinao koa izahay
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy mpanelanelana amin'ny fantsom-boaloboka? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay mba hanampiana anao hamorona. Ny 3 4 Inch Tube Connector rehetra dia azo antoka ny kalitao. Izahay dia orinasa niandohan'i Sina tamin'ny mpampitohy fantsona misy kofehy. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy vokatra: fantsom-pifandraisana Hydraulika> Fitaovana Hydraulika metric
Banjo Stainless vy fantsom-pifandraisana hydraulic ...
87311 faritra duffield Crimp thermoplastic faritra hydraulic
vy vy metrika hosory parker hydraulic fi ...
samy hafa karazana premade hydraulic mety ho ...
Ampifandraiso haingana ny valizy fantsom-pitrandrahana fantsom-pifandraisana
Fantson'ny fantson-drivotra fantson-drano